Torohevitra ho an’ny fanoratana, volana Janoary: Ndeha hanambatra ny tontolontsika isika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2019 6:08 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 28 Desambra 2015)
Ndao ny Taombaovao ampanenoina amin'ny fanoratana lahatsoratra iraisan'ny faritra mba hanomezana ho an'ireo mpamaky ny fomba fijery ireo olona mitovitovy sy ny faritra samihafantsika. Sary: Ny tontolo tsy misy sisintany an'i E Pluribus Anthony tao amin'ny English Wikipedia
Arahaba nahatratra ny Noely ary mirary Taona Vaovao sambatra ry GVers namana!
Izaho no hanao ny torohevitra ho an'ny asa fanoratana amin'ny Janoary ary maniry ny hanao azy aminà fomba hafa sy manantena ny hahita izay fampidirana avy aminareo. Ny ifantohan'ny torohevitra ho an'ny volana Janoary dia ny fanoratana lahatsoratra ifandrimbonan'ny faritra. Hisy sosokevitra harosoko ho lohahevitra sy endrika samihafa isankerinandro, ary ny fandraisanareo anjara dia hiafara anaty lahatsoratra izay azontsika avoaka ao amin'ny GV avy eo.
Tsy vitan'ny hoe mahafinaritra fotsiny ny lahatsoratra ifandrimbonan'ny faritra fa sady mitondra fanabeazana no manome antsika fomba fjery hafa momba ny faritra sy ny olona mitovitovy! Ny Herinandro Voalohany dia hiresahana momba ny saripika any anatin'ireo lahatsoratra ifandrimbonan'ny faritra; ny Herinandro Faharoa dia ho momba ny fampiasana ny Bitsika, ny Herinandro Fahatelo dia ho momba ny Facebook ary ny Herinandro Fahefatra dia hiresahana momba ny fampiasàna lahatsary!
Ho hita ao anatin'ireo torohevitra isankerinandro ireo torolalana miaraka aminà lohahevitra naroso, ho hita ao koa ny endrika taratasy azonao fenoina. Zavadehibe ny fandraisanareo anjara mba ho tafita ity drafitrasa ity ary mba hisy dikany ireo torohevitra isankerinandro ka hisy vokatra anaty lahatsoratra. Enga anie, hiteraka fomba fiasa ahafahana manoratra lahatsoratra maromaro kokoa ifandrimbonan'ny faritra izy ity mba ho tetezana mampifandray ny fifanakalozandresaka eo amintsika ety anaty aterineto.
Ho an'ny Herinandro Voalohany, ny lahatsoratra ifandrimbonan'ny faritra ho ataontsika dia ny fampiasana saripika. Handefa imailaka iray ho fampahatsiahivana aho amin'ny 30 Desambra. Ny Taombaovao no ho lohahevitry ny saripika. Aza adino ny mijery izay saripika mahaliana indrindra maneho ny fomba fandraisana ny Taombaovao ho an'ny olona / firenena resahanareo!
Raha misy hevitra na sosokevitra avy aminareo ho an'ny Herinandro Faharoa, Herinandro Fahatelo ary Herinandro Fahefatra, aza misalasala mampita izany:
Ataovy milay ny anareo!
21 Oktobra 2019Dika
03 Jolay 2019Dika
02 Jolay 2019Dika